Margarekha कुन प्रदेशमा कति मत ? कसले मार्दैछन् बाजी राष्ट्रियसभा – Margarekha
कुन प्रदेशमा कति मत ? कसले मार्दैछन् बाजी राष्ट्रियसभा
२३ माघ / भोली हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम रहेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आ–आफ्नो प्रदेशमा पुगिसकेका छन् । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सबै दलले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर अनिवार्य रुपमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न ह्विप समेत जारी गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भोली हुने मतदानमा आफ्ना पार्टीका सबै प्रतिनिधिहरु अाअाफ्ना प्रदेशमा पुगिसकेको बताउनुभयो । यस्तै एमालेले मतदान नसकिए सम्म आफ्नो प्रदेश नछाड्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई यस अघि नै सर्कुलर गरिसकेको छ ।
प्रदेश २ मा बाहेक ६ वटै प्रदेशमा भोली मतदान हुँदै छ । प्रदेश २ मा भने यस अघि नै सवै आठै जना निर्विरोध भइसकेका छन् ।
हरेक प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्र तोकेर मतदानका लागि सबै तयारी पुरा गरिसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश १ को विराटनगर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरामा मतदान हुनेछ । यस्तै प्रदेश ५ को घोराही, ६ को विरेन्द्रनगर र ७ नम्वर प्रदेशको दिपायलमा मतदानको सबै व्यवस्था मिलाईएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा ४ वटा मतपत्र
निर्वाचनमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यक र अन्य समूह गरी चारवटा मतपत्र प्रयोग हुँदै छ । एक मतदाताले चार ठाउँमा भोट हाल्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको लागि हरियो र स्थानीय तहको लागि रातो गरी दुई रङका चार प्रकारका मतपत्र प्रयोग गरिने प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।
कुन प्रदेशमा कति मतदाता, कहाँ कसले जित्छन् ?
राष्ट्रियसभामा मतदान गर्ने प्रतिनिधिको मतभार फरक फरक रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ ।
अाज निर्वाचन हुन लागेकाे ६ वटै प्रदेशमा एमाले, माअाेबादी गठबन्धनकै बहुमत देखिएकाे छ । एकल संक्रमणीय प्रणालीमा निर्वाचन हुने भएकाले कांग्रेस लगायत अन्य दलले पनि केहि सिटमा जित निकाल्ने अवस्था छ ।
प्रदेश नम्वर १ :– प्रदेश नम्वर १ मा कूल मतदाता ३ सय ६७ मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका २ सय ७४ छन् । प्रदेश नम्बर १ मा स्थानीय तह र प्रदेशसभा दुवैतिर एमालेको एकल बहुमत छ । एमालेले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरि १५३ जना जितेको छ भने भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ एमालेले १५ सिट पाउँदामा ५१ जना मतदाता छन् । स्थानी तह र प्रदेशसभागरी एमालेको मात्रै २०४ मतदाता रहेका छन् । जुन कुल मतदाता संख्याको बहुमत हो । १ नम्बर प्रदेशमा माओवादीको मत स्थानीय तहमा २० मात्र छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र समानुपातिक ५ गरि १५ जना मतदाता छन् । माओवादीको कुल मत ३५ समेत थपिँदा बामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा २३९ मत हुनेछ ।
कांग्रेसको पक्षमा स्थानीय तहका प्रमख र उपप्रमुख ९७ जना र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित ८ र समानुपातिक १३ गरि २१ मतदाता छन् । कांग्रेसका कुल मतदाता ११८ रहेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका स्थानीय तहमा ४ र प्रदेशसभामा ३ गरि ७ जना मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तह १ सय ३७ छन् । सबै मतदाताको मतभार ९ हजार ३ सय ९६ हुन आउँछ ।
प्रदेश नम्वर ३ :– प्रदेश नम्बर ३ मा स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ रहेकाले स्थानीय तहबाट २ सय ३८ जना र प्रदेशसभा सदस्य १ सय १० गरी ३ सय ४८ जना कुल मतदाता छन् । उक्त प्रदेशका मतदाताको मतभार ९ हजार ५ सय ६४ हुनेछ । प्रदेश नम्बर ३ मा स्थानीय तह र प्रदेशसभा दुवै ठाउँमा एमालेको एकल बहुमत छ । वामपन्थी गठबन्धन हुँदा कांग्रेस निकै पछि पर्नेछ । ३ नम्बर प्रदेशबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि एमालेका १३५ मतदाता छन् । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित ४२ र समानुपातिक १६ गरि एमालेका ५८ मतदाता हुनेछन् । एमालेको कुल मतदाता १९३ छन् । त्यस्तै माओवादीबाट स्थानीय तहका २६ र प्रदेशसभामा २३ गरी कुल ४८ जना मतदाता छन् ।
कुल मिलाएर यो प्रदेशबाट वामपन्थी गठबन्धनका २४१ मतदाता हुनेछन् । त्यस्तै कांग्रेसका स्थानीय तहका ६२ मतदाता छन् । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ र समानुपातिक १४ गरि २१ सांसद छन् । कांग्रेसको कुल मतदाता संख्या ८३ हुनेछ । यो प्रदेशबाट विवेकशील, राप्रपा, नयाँ शक्तिका पनि केही मतदाता छन्, जुन निर्णायक संख्या भने होइन ।
प्रदेश नम्वर ४ :– मतदाताको संख्या र मतभारमा प्रदेश नम्वर ४ भने चौथो स्थानमा छ  । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ६० र स्थानीय तहका १ सय ७० गरी कुल मतदाताको संख्या २ सय ३० छन्  । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ८५ छ । सबै मतदाताको मतभार भने ७ हजार २ सय ३६ पुग्छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा एमाले र कांग्रेसका मतदाता संख्या लगभग बराबरी देखिएको छ । एमालेका स्थानीय तहका ७१ मतदाता छन् । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित १७ र समानुपातिक १० गरि २७ सांसद छन् । कुल मिलाएर यो प्रदेशमा एमालेका ९८ जना मतदाता छन् । माओवादीका स्थानीय तहका १२ मात्र मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ९ र समानुपातिक ८ गरि १७ मतदाता छन् । माओवादीका कुल २९ मतदाता र एमालेका ९८ मिलाउँदा वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा १२७ मत हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका ८१ मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ र समानुपातिक ९ गरि १५ सांसद छन् । कांग्रेसको कुल मिलाएर ९६ मत हुने यो प्रदेशसमा एकल संक्रमणीयबाट कांग्रेसले एक वा दुई सिट जित्न सक्छ । यस प्रदेशबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँशक्तिको पनि केही मतदाता छन् ।
प्रदेश नम्वर ५ :– प्रदेश ५ मा सबै मतदाताको मतभार ५ हजार ९ सय ४० पुग्छ  । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ६० तथा स्थानीय तहबाट २ सय १८ गरी कुल ३ सय ५ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १ सय ९ छ  । प्रदेश नम्बर ५ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि एमालेका ९१ मतदाता छन् । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित २७ र समानुपातिक १३ समेत ४० जना सांसद छन् । कुल मिलाएर यो प्रदेशबाट एमालेका १३१ मतदाता हुनेछन् । त्यस्तै माओवादीका स्थानीय तहबाट ३७ जना मतदाता छन् भने प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ र समानुपातिकबाट ६ जना गरि २१ सांसद छन् ।
माओवादीको कुल मतदाता संख्या ५८ रहेको छ । यसरी ५ नम्बर प्रदेशमा बामपन्थी गठबन्धनका १८९ मतदाता छन् । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरि ६८ मतदाता छन् । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ र समानुपातिक १२ सहित १९ सांसद छन् । कांग्रेसको कुल मतदाता संख्या ८७ हुनेछ । यो प्रदेशबाट संघीय समाजवादी फोरमको पनि १२ मत हुनेछ । स्थानीय तहका १६ र प्रदेशसभाका ४ गरि फोरमका १६ मतदाता छन् । यो प्रदेशसबाट राजपा, राजमो र नयाँ शक्तिका पनि केही मत छन् । तर ती निर्णायक हुने अवस्था छैन ।
प्रदेश नम्वर ६ :– प्रदेश ६ मा अन्य सबै प्रदेशभन्दा कम मतदाता छन् । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ४० र स्थानीय तहका १ सय ५८ गरी कुल १ सय ९८ मात्रै मतदाता मात्रै छन् । ती मतदाताको मतभार ४ हजार ७ सय ६४ हो । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ७९ छ । यहाँ एमालेको एकल बहुमत छ । स्थानीय तहमा एमालेका ५९ मतदाता छन् भने प्रदेशसभामा २० मतदाता छन् । कुल मिलाएर एमालेको ७९ मतदाता छन् । माओवादीको स्थानीय तहमा ५४ र प्रदेशसभामा १३ गरि ६७ मत जोड्दा वामपन्थी गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत हुनेछ । यो प्रदेशबाट कांग्रेसका स्थानीय तहबाट ४२ मतदाता छन् भने प्रदेशसभाबाट ६ मत जोड्दा ४८ मात्र हुन्छ । यो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम छ ।
प्रदेश नम्वर ७ :– कुल मतदाता २ सय २९ रहेको प्रदेशसभा ७ मा मतदाताको मतभार ५ हजार ७ सय ८ हुन आउँछ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५३ र स्थानीय तहबाट मतदाता हुने संख्या १ सय ७६ छन् । त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या ८८ छ । ७ नम्बर प्रदेशमा एमालेका स्थानीय तहमा ८३ मतदाता छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १७ र समानुपातिक ८ गरी एमालेका २५ मतदाता छन् । कुल मिलाएर एमालेका १०८ मतदाता हुनेछन् । माओवादीका स्थानीय तहमा १९ र प्रदेशसभामा १९ गरि ३८ मतदाता छन् । वामपन्थी गठबन्धनको यहाँ पनि बहुमत हुनेछ । कांग्रेसका स्थानीय तहमा ७४ मतदाता छन् भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ४ र समानुपातिक ८ गरी १२ जना मतदाता छन् । कांग्रेसको मत कुल मिलाएर ८६ हुनेछ । यहाँ कांग्रेसले एकल संक्रमणीयबाट एक दुई सिट जित्न सक्छ ।नेपालबाणीबाट
२३ माघ २०७४, मंगलवार १३:५६ प्रकाशित